“N’Golo Kante ayaa ka fiican Claude Makelele.”. – Gool FM
“N’Golo Kante ayaa ka fiican Claude Makelele.”.
Byare September 9, 2016
(London) 09 Sebt 2016. Nemanja Matic ayaa ammaan ugu qubeeyay madaalaha cusub ee kooxdiisa N’Golo Kante isagoo xitaa ku sheegay inuu ka fiican yahay rugcadaagii soo maray Blues ee Claude Makelele.
Matic oo hadlay ka hor kulanka ay Chelsea la yeelan doonto axada kooxda Swansea City ayaa tilmaamay muhimmada uu Kante u leeyahay kooxdiisa.
“Muhiim ayuu inoo yahay innaga, gaar ahaan booskaasi,” Matic ayaa sidaa u sheegay Sky Sports.
“Waa inaad dheeli tirnaan siiso kooxda wuuna garanayaa isaga sida uu ugu baahan yahay inuu qabto shaqadaa. Aad ayuu muhiim inoogu yahay innaga.
“Waan ogahay sida ay u adag tahay inaad ka ciyaarto booskaas aad ayaana u faraxsanahay maxaa yeelay Kante si fiican ayuu sameynayaa wuxuuna noqonayaa laacib aad muhiim inoogu ah innaga, laga yaabee mid ka mid ah xiddigaha inoogu muhiimsan xilli ciyaareedkan.
“Aad ayay ugu adag tahay isaga, wayna adkaan doontaa, laakiin waxaan hubaa inuu diyaar u yahay.
“Dad badan ayaa yiri waa Makelele-ga cusub, laakiin u maleyn maayo, Makalelel wuxuu ahaa ciyaaryahan wayn dhammaana waan tix galinaa, gaar ahaan aniga maxaa yeelay waan garanayaa booskaas iyo sida ay u adag tahay in laga ciyaaro.
“Laakiin waxaan aaminsanahay in N’Golo uu ka fiican yahay Makalele. Si fiican ayuu u qabanayaa shaqadiisa daafaca wuxuuna leeyahay tayo dheeri ah.”.
Kante ayaa si adag ku bilowday kulamadii Chelsea isagoona ka caawiyay Conte inuu guul gaaro saddexdii kulan uu ciyaaray Premier League.
HAMBALYO FARXAAN: Soomaaliya oo guul kasoo hooysey Olombikada Naafada ee ka soconaya Rio de Janeiro + Sawirro
Tababarihii hore ee Man City Manuel Pellegrini oo si diiran loogu soo dhaweeyay Shiinaha…+SAWIRRO